၂၉-၅-၂၀၁၂နှစ် ည၁၀ နာရီအချိန်တွင်မြန်မာန်မာနယ်စပ်နစ်မြစ်အနောက်ဖက်ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ မြစ်နားရွာ။ခြံချောင်းအနီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ၂၉-၅-၂၀၁၂နှစ် ည၁၀ နာရီအချိန်တွင်မြန်မာန်မာနယ်စပ်နစ်မြစ်အနောက်ဖက်ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ မြစ်နားရွာ။ခြံချောင်းအနီး
၂၉-၅-၂၀၁၂နှစ် ည၁၀ နာရီအချိန်တွင်မြန်မာန်မာနယ်စပ်နစ်မြစ်အနောက်ဖက်ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ မြစ်နားရွာ။ခြံချောင်းအနီး
Posted by chityimhtoo on Jun 1, 2012 in News |7comments
၂၉-၅-၂၀၁၂နှစ် ည၁၀ နာရီအချိန်တွင်မြန်မာန်မာနယ်စပ်နစ်မြစ်အနောက်ဖက်ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ မြစ်နားရွာ။ခြံချောင်းအနီး ၀ါးခွတ်ချောင်းအင်တော်လီ
မနေ့ကပဲ ကုလားတွေက အဓမ္မ ပြုကျင့်ပြီး သတ်ခဲ့တဲ့သတင်း ကြားရပြီးပြီ ..
ခုလည်း ကုလားတွေက ကျူးကျူးကျော်ကျော် ဝင်ပြီး ဝိုင်းရိုက်တဲ့သတင်း ဖတ်လိုက်ရတော့ …
စိတ်ထဲမှာတော့ ထောင်းကနဲ ဒေါသဖြစ်မိတယ်ဗျာ ..
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီငနဲသားတွေရဲ့ဇက်ကို တန်းစီပြီး ဓားနဲ့ ပိုင်းပစ်လိုက်ချင်တယ် …
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ပြသာနာကြီးတော်တော်များကို အများမသိအောင် တိုးတိုးတိက်တိက်လေး ပျောက်ဖြစ်တက်ကြပါသည် .. နိုင်ငံတော်ရဲ့မီဒီယာတွေက ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကို ပြည်သူတွေသိအောင် ရေးသားဖော်ပြပေးကြပါ … ကုလားတွေစော်ကားတာ တော်တော်များနေပြီ … ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူးနော် … အမျိုးသားရေးဖြစ်နေပြီ အရေးကြီးရင် သွေးနီးရမယ်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် ရခိုင်သွားမလို့စီစဉ်နေတာ …
မျိုးချစ်စိတ်ဓာက်ရှိတဲ့သူတွေကိုကြတော့ ထောင်ထဲအကုန်ထည့်တယ် … ကျောက်ဆည်ကုလားဗမာအရေးအခင်းမှာ ထောင်ကျသွားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ လူတွေကျတော့ မျိုးချစ်စိတ်ရှိလို့ ထောင်ကျလိုက်တာလား …
ကုလားတွေတော်တော်ဆိုးလာပါလား ။ ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်တစ်ခုခုတော့လုပ်သင့်နေပြီ။ အရင်က ကုလားဆီကလာဘ်စားပြီးငြိမ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေက မြန်မာမဟုတ်ကြဘူးလား ။ မီဒီယာတွေတိုးတက်လာတဲ့အချိန်ကြမှ ဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာရတာ ။
ကိုချစ်ရင်ထူးရေ. နတ်မြစ်လို့ ရေးတာထင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ဒါနယ်ခြားမျဉ်းပေါ်က အရေးအခင်း
Boe Aung says:
လှည်း တန်း က သွား ဆရာ ၀န် မလေး ကို မီး ရှို့သတ် တာ ဘယ်သူ ပါလဲ။ လမ်း မတော် မှာ ၁၆ နှစ် သမီး လေးကို သတ် ပြီး မီး ရှို့ တာ ဘယ်သူ ပါ လဲ။ နာ မည် ကျော်အ ဆို ကျော် မလေး သတင်း သာ မှန် ခဲ့ ရင် ခရစ် ယန် မလေး ကို ဗမာ ဗုဒ္ဒ ဘာ သာဝင် တွေ က မုဒိန်းကျင့်တယ်ဆို ပြီး တွေ့ မြင် သမျှ ဗမာ တွေကို ရိုက် သတ် ရတော့ မလား ကု လား ဘက် က နာတာမဟုတ်ဘူး ။စဉ်း စား ချင့် ချိန် ဥာဏ် လေး ရှိ လာပြီး နိုင် ငံ ကြီး သား စိတ် ဓာတ် တွေ ဖွံ့ဖြိုး လာအောင် ပြော ပြ တာ ။
Because of the stupid person like you, our MYANMARs become weak and stupid. People like you let the other people destroy our “Amyo Barthar Tharthanar”.
Problems have to solve according to the nature of problem. eg. if you get dirty in your ass use toilet paper but if you dirty in your face use soft and clean tower. SEE… ( I wonder… how do you sovle your problem like that? use toilet paper to clean your face? i think so)
This problem is not between our family member(i mean tine yin thars). This problem is our family member (tine Yin Thar) and foreigner (kalar lusoe).
DON’T HIDE PROBLEM LIKE THAT UNDER THE WORD OF “NAING KAN GYEE THAR”
by the way, I am notablind Myo Chit. But I know what is blind myo chit.
နိုင်ငံကြီးသားစိတ်ရှိချင်ပေသည့် စော်ကားတာခေါင်းငုံခံရင် ခွေးကောင်တွေက ချီးပါပါတယ်ဗျ။
အဲဒီကောင်တွေ ဘယ်လောက်မိုက်ရိုင်းလဲ ဖတ်လိုက်တိုင်း အင်းးးးးတော်ပါပြီ မဆဲတော့ပါဘူးးးးးး